Mahoriza efriji → Chipfeko chinotonhora chechitoro • P & M machira emakomputa
Mahoriza efiriza chikamu chakakosha kwazvo chemidziyo yemafriji uye zvitoro zvinotonhora. Maoko anowanzo kuburitswa akananga kusangana nenhumbi nemidziyo. Ivo vanowanzo kuve pasi pechando nekuda kwenzvimbo dzakafumurwa uye chiito chematembiricha akaderera, mhepo inowanzoitika ine hunyoro hwakanyanya. Frostbite inowanzo tanga ne reddening yeganda, nekuti kutenderera kweropa kuno mhanyisa kudziisa zvikamu zvakatonhora. Zviratidzo zvinotevera marwadzo, kuvaviwa, uye kunzwa kwekuzvimba maoko. Iyo dhigirii yechando inoenderana nenguva uye mamiriro,
umo ganda raionekwa kumhedzisiro yakaipa yetembiricha yakaderera. Gloves ndiyo dziviriro yakakwana kubva kumatembiricha akadzika, uye inokutendera kuti uite mabasa ako zvakasununguka. Magorovhosi furiza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinokutendera kuti uchengetedze maoko ako kubva kuchando, ndosaka chitoro chedu chinopa chete zvigadzirwa zvemhando yepamusoro kubva kune vakakurudzira vagadziri.
POLAR RANGI COLDSTORE Gloves Gloves yekutonhora uye kutonhora kuchengetedza
Magorovhosi efriji uye makamuri anotonhora TG2 XTREME COLDSTORE Gloves
Yakasarudzika magurovhosi ehunyanzvi anoita kuti vatengi vade kutenga zvigadzirwa kwete chete magurovhosi, asiwo hwaro hwese hwezvipfeko zvemafriji uye zvitoro zvinotonhora, kusarudza kubva bhurugwa, mabhachi kana shangu. Fleece Drivers anodziya magiravhusi chigadzirwa chinosangana neEE388 zviyero. Orenji TG1 Pro Coldstore magurovhosi chigadzirwa neThinsulate lining. Iyo modhi yeArctic Goridhe Coldstore magurovhosi kana Eisbaer Mahiza magirafu anosangana nezvinodiwa zveEN 511 / EN 388 - izvi zvigadzirwa zvakasarudzwa kubva pane zvatinopa. Mhando dzese dzemagurovhosi dzakatsanangurwa zvakadzama kuita kuti kusarudzwa kuve nyore sezvinobvira.
Fleece vatyairi chafariz Magorovhosi Chipfeko
Mitengo inokwezva uye mhando yepamusoro
Kambani yedu inopa kugadzira zvigadzirwa, matura, zvitoro zvinotonhora, makambani ekugadzirisa zvinhu, uye izvi ndizvo zvinogadzira kuraira kukuru zvigadzirwa. Nekuda kweizvi, isu takakwanisa kushanda zvinokwezva zvinoderedzwa kune vagadziri vedu, zvichikonzera kukwikwidza mitengo yevatengi. Kuwedzera mhando yepamusoro yezvigadzirwa inoita kuti vatengi vazhinji vagutsikane vadzokere kwatiri, uye izvi zvinotibvumidza kuti tigadzire mitengo yekutenga kubva kuvashandi vedu pakaderera.
Kune ruzhinji rwezvipfeko uye machira, isu tinogona kumaka nechero magirafu, tinoita logo tichishandisa nzira kombasi yemakomputa kana kudhinda screen. Isu tine yedu yega muchina paki, iyo inotibvumidza isu kutevedzera yekumaka maitiro pane ese nhanho.
Magorovhosi efriji uye makamuri anotonhora TG1 PRO COLDSTORE
ndiro yezvitoro zvinotonhora uye mafirizazvipfeko zvekudzivirirafiriji magiravhusiMagorovhosi eColdstoremagurovhosi ekushisa kwakadzikaNdarama Gadzira magurovhosiMaharagi egiraziMvere dzemagurovhosiChando chitoro magiravhusimagirafu anopisa
Resa ichi chinopihwa